CIN Khabar साउन महिना माछा मासु नखाने धर्म की विज्ञान ?
सीआईएन बिहिबार, साउन १, २०७७, ०७:५१:००
काठमाडौं । आजबाट साउन महिना सुरु भएको छ । धार्मिक आस्था राख्नेहरुका लागि विशेष महिना मानिन्छ । अब साउन लाग्यो माछा मासु खान्न भन्नेहरु धेरै हुन्छन ।
साउनको सोमवार व्रत बस्ने चलन पनि छ । मासुन नखाने धर्ममात्रै होकी वैज्ञानिक कारण पनि होला ? अहिले बर्षाको समय रोगका हिसावले सङ्क्रमणको उच्च जोखिम हुन्छ ।
चिकित्सकका अनुसार मासुजन्य परिकारमा सङ्क्रमणको बढी संभावना हुन्छ ।
साउनमा हाम्रो शरीरले सूर्यको प्रकाश राम्ररी पाउँदैन । यसले गर्दा हाम्रो पाचनशक्ति कमजोर हुन्छ र मासु जस्तो छिट्टै नपच्ने कुरा लिँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी अनेकौं समस्या आइलाग्छन् । मासु पचाउन समस्या हुन्छ ।
बर्खाको मौसममा पशुहरूलाई अनेकौं किसिमका सङ्क्रामक रोग लाग्छन् र त्यस्ता रोगी पशुको मासु खाँदा रोग सर्न सक्छ ।
यो माछाको प्रजनन महिना हो । प्राकृतिक नदीहरु र खोलामा पाइने सिमित माछाहरु प्रजनन महिनामा खाइदिएमा अर्को वर्ष माछाको सङ्ख्या घट्ने वा लोप नै हुने डर हुन्थ्यो । त्यसैले माछामासु खानमा नियन्त्रण गरिएको वैज्ञानिक तर्क छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन १, २०७७, ०७:५१:००